Debian inoronga chiitiko chepamhepo chine chekuita nemitambo | Linux Vakapindwa muropa
Debian Yakapa kushamisika kusingatarisirwi kukuru. Uye ndezvekuti nharaunda iyi yevagadziri yakatarisa pane ino projekiti huru ikozvino inoita kunge iri kufarira nyika yemitambo yemavhidhiyo. Icho chikonzero ndechekuti vanhu vazhinji uye vazhinji vari kushandisa Linux pakutamba, saka vazhinji vanogadzira vari kuona izvi uye vachidzosera yavo mamepu ekuvandudza chinhu ichi.
Debian ndomumwe wavo, uye saka Debian akaronga chiitiko chepamhepo chinonzi MiniDebConf Online # 2 "Yekutsikisa Yekutsikisa". Chikamu chechiitiko chakakura kwazvo uye chakajairika chichagara mazuva mana pakupera kwaNovember, kubva 4-19, pamwe nemutambo wevhidhiyo mutambo uri pakati paNovember 22 na21.
Mazuva ano achanyanya kunakidza kune vese vashandisi veDebian vanoshandisawo yavo distro ku tamba kana gadzira mitambo yemavhidhiyo. Debian Linux saka inobatana neiri kukura wave kuti igutse vamwe vashandisi. Parizvino vachiri kutaura nevanhu nekuda kwehurukuro dziri kuzopihwa uye vari kupedzisa zvese ruzivo.
Nekudaro, kana iwe uchida kuziva zvakatorongwa kare Kune izvi zviitiko zvepamhepo, heino runyorwa.
Inotaura nevechitatu-bato vhidhiyo vateereri vemitambo kuratidza kwavo ruzivo, maumbirwo avakaitwa, mari yekuita mapurojekiti avo, kana maitiro ekuzvichengeta nenzira inoenderera.
Ruzivo pamahara emagetsi enjini uye zvishandiso zvekusimudzira mutambo wevhidhiyo.
Samples ezvishandiso anowanikwa kugadzira grafiki uye mumhanzi wemitambo.
Nezve bug fixes muvhidhiyo mutambo mapakeji.
Mharidzo yemazita makuru evatambi vatove akaiswa mumapepa, pamwe neimwe yemahara DFSG inoda kurongedzwa.
Rangarira kuti zvichave kubva munaNovember 21 kusvika 22 kana iwe usiri kuda kupotsa chero cheizvi nezvimwe zvakawanda, ungave uri vatambi kana iwe uchida kugadzira mitambo uchaida ... Zvese izvi nekuda kweizvi chiitiko chikuru chepamhepo (yezvikonzero zvechirwere) kubva kunaDebian.
Mamwe mashoko - MiniDebConf Pamhepo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Debian inoronga chiitiko chepamhepo-chine chekuita nemitambo
Pindura kuna Arnulfo
Chii chiri midziyo. Vhura sosi yevanamuzvinabhizimusi